Tag Archive for "उपसभापति" - कांग्रेस उपसभापति निधि डेनर्माक प्रस्थान
कांग्रेस उपसभापति निधि डेनर्माक प्रस्थान
काठमाडौं । नेपाली कांग्रेसका उपसभापति विमलेन्द्र निधिको नेतृत्वमा पार्टीका एक प्रतिनिधिमण्डलले प्रजातन्त्र मेलाको अध्ययन भ्रमणका लागि बिहीबार साझ डेनमार्कको राजधानी कोपनहेगनतर्फ प्रस्थान गरेका छन् । डेनमार्कको बर्नहोल्ममा यही जुन १३ देखि १७ तारिखसम्म हुने मेलामा सहभागी हुन कांग्रेस उपसभापति निधिसहितका नेताहरू त्यसतर्फ प्रस्थान गरेको उनको निजी सचिवालयले जनाएको छ । डेनिस इन्स्टिच्युट फर पार्टीज एण... थप पढ्नुहोस्
नेविसंघका अध्यक्ष महर राजीनामा दिने तयारीमा
काठमाडौं । नेपाली कांग्रेसको भ्रातृ संगठन नेपाल विद्यार्थी संघ नेविसंघका अध्यक्ष नैनसिंह महरले पदबाट राजीनामा दिने भएका छन् । पार्टीले नेविसंघको तदर्थ समिति गठनका लागि मार्गप्रशस्त गर्न भन्दै राजीनामा दिन दबाब दिएपछि महरले राजीनामा दिन लागेको बताइएको छ। काँग्रेस केन्द्रीय समिति बैठक अाज पार्टी कार्यालय सानेपामा बसिरहेको छ । बैठकबाट नेविसंघमा तदर्थ समिति गठन गर्ने कांग्रेसको तयारी छ । तर, अहिले ... थप पढ्नुहोस्
बरियतामा निधि र गच्छदारमध्ये को बरिष्ठ ?
काठमाडौं । कांग्रेसमा मधेसी दुई नेता उपसभापति भएका छन् । विमलेन्द्र निधि केही महिनाअघि मनोनीत भएका थिए । दुई नेताामध्ये पहिले मनोनीत गरिएका निधि नै वरियतामा अगाडी रहने भएका छन् । काग्रेस सहमहामन्त्री डा. प्रकाशशरण महतले वरीयताक्रममा विजय गच्छादारभन्दा निधि अगाडि रहने बताए । पहिले आफु र गच्छादार दोस्रो उपसभापति हो । यो कुरा उनलाई पनि थाहा छ र सहमत हुनुहुन्छ, निधिले आफुनिकट नेताहरुसँग भनेको एक, ने... थप पढ्नुहोस्